Kwakhona uBatman: ISixeko sase-Arkham GOTY kwintengiso yexeshana | Ndisuka mac
Batman: Arkham City GOTY kwintengiso yexesha elincinci kwakhona
Umdlalo wamagorha we Batman: Isixeko saseArkham GOTY, ibuyile iyathengiswa kwiVenkile yeApple yeMac. Kule meko, umdlalo ofikelele kubasebenzisi beMac kunyaka ophelileyo 2013, unexabiso elinesaphulelo elinomdla kwithuba elimiselweyo.
Ngokusengqiqweni, ayiloxesha lokuqala ukuba umdlalo ufumene isaphulelo sexeshana kwaye ndivela eMac, sele siyibonile ngexabiso eliphantsi kunesiqhelo. Kule meko uBatman: Isixeko saseArkham GOTY, Iyafumaneka ukuba ithengwe nge-5,49 ye-euro kuphela.
Ukongeza kwisaphulelo, kufanele kuqatshelwe ukuba uBatman: Umdlalo weSixeko sase-Arkham woHlelo loNyaka wongeza yonke into enokukhutshelwa kubandakanya: Impindezelo ka-Harley Quinn, ibali elizimeleyo elenzeka kwiiveki ezimbini emva kweziganeko zomdlalo ophambili, kwi Ukongeza kwi-Nightwing, Catwoman, Robin, Arkham City Skins kunye neepakethe zemephu zoMceli mngeni. Kwelinye icala kubalulekile ukukhankanya lezona mfuno zisezantsi Kufuneka udlale iBatman: Isixeko saseArkham:
I-2.0 GHz okanye iprosesa ekhawulezayo
I-4 GB ye-RAM okanye nangaphezulu
Yiba neMac OS X 10.7.5 okanye ngaphezulu efakiweyo
256MB ubuncinci bemizobo
16GB isithuba sediski sasimahla
Kubathandi besaga yeBatman eli inokuba lithuba elihle kakhulu lokufumana umdlalo ukuba bebengawuthenganga nakwezinye izibonelelo zangaphambili ezenziweyo ngalo mdlalo. Ixabiso lokwazisa lomdlalo laphawulwa kwii-euro ezingama-39,99, Ngokuhamba kwexesha ixabiso eliqhelekileyo li-euro ezingama-19,99 kwaye ngoku linikezelwa ixesha elincinci ukuya kwi-5,49 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Imidlalo » Batman: Arkham City GOTY kwintengiso yexesha elincinci kwakhona
Uyikhubaza njani i-imeyile ye-imeyile kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra
I-Elmedia Player kunye neFolx yokukhuphela echaphazelekayo yi-OSX / Proton malware